Macluumaadka warshadaha xeedho USB PD & Type-C
USB PD & Type-C Asia Display Charging Head Network waxay bilaabeen dhacdo si kor loogu qaado warshadaha lacag-bixinta degdegga ah, oo loo qabtay 12 kal-fadhi oo isku xiga. Shantii sano ee la soo dhaafay, shirkii warshadaha ee lagu soo dallacayay degdegga ee ay qabatay Charging Head Network wuxuu ku guuleystay kaqeybgalkii xiisaha badnaa ...
Ma rabtaa awood dheeri ah, laakiin dhakhso badan? Tiknoolajiyadan cusub ee lacag bixinta ee GaN ayaa sheeganeysa inay gaarsiin karto
Maalmaha aad lugeyneyso leben xoog badan iyo fiilooyin badan si aad qalabkaaga uga ilaaliso inay kor u kacdo ayaa laga yaabaa inay dhammaato. Saacadaha sugitaanka taleefankaaga casriga ah ama laptop-kaaga si ay kuugu soo oogaan, ama aad ula yaabto xeedho kulul oo naxdin leh, sidoo kale waxay noqon kartaa wax la soo dhaafay. Teknolojiyada GaN ayaa halkan taal waxayna ballanqaadaysaa inay ...
Waa maxay Bixinta Awooda USB?
Si kastaba ha noqotee, arrintan u hoggaansamida waxay ku saabsan tahay inay ahaato wax la soo dhaafay iyadoo la hirgelinayo qeexida Bixinta Awooda USB. Bixinta Awooda USB (ama PD, marka la soo gaabiyo) waa hal heer oo lacag bixin ah oo loo adeegsan karo dhamaan qalabka USB-ga. Caadi ahaan, qalab kasta oo ay soo rogto USB wuxuu yeelan doonaa ...